एउटी आमाको काँक्रो खोसेर ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले देखाएको दादागिरी-दवाबको लागि सक्दो शेर गरिदिनुहोला गरिबीले नि गरेर खान पाउनु पर्छ
- नेपाली सन्देश शुक्रबार, बैशाख १४, २०७५ , 6.2K जनाले हेर्नुभयो
एउटी आमाको काँक्रो खोसेर ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले देखाएको दादागिरी-दवाबको लागि सक्दो शे
अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ, एउटी आमाको काँक्रो खोसेर ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले देखाएको दादागिरी । पत्रकार शिवराज बस्ताकोटी (शिव दाइ) ले बेलुका फेसबुकमा आएर फोटो र त्यसबेलाको घटनाक्रम सविस्तार उल्लेख गरेका छन् । सयौंले शेयर लाइक, कमेन्ट गरेका छन् । यही वैशाख ९ गतेको दिन हो । एउटी ५० वर्ष नाघेकी आमा क्रेट भरी काँक्रो बोकेर सकि नसकि पृथ्वीचोक सडकमा हिँडिरहेकी थिईन् । पृथ्वीचोक क्षेत्रमा अहिले सडक बन्ने क्रममा छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नजिकै भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । उनलाई देखेपछि ट्राफिक प्रहरीले भित्रै बोलाए ।
काँक्रो किन्न भनेर बोलाएको ठान्दै महिला भित्र गईन् । त्यसपछि ट्राफिकले निर्दयी ढंगले क्रेट नै खोसेर कार्यालय प्रमुखकै कार्यकक्षमा लगे । के भयो बाबु भन्दै उनी पछि पछि गईन् । दुई वटा काँक्रो ट्राफिकलाई नै ल खाउ बाबु गर्मी छ भनेर दिईन् । ट्राफिकले लिन मानेनन् । केहि छिनमा नगरप्रहरी पो आयो । नगर प्रहरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भित्रै पुगेर काँक्रोले भरिएको क्रेट बोकेर गयो । उनी डाँको छोडेर रुन लागिन् । पत्रकार शिव दाइले लेखेका छन्ः म हेरेको हेर्यै भए यसरी कानुन नियमका नाममा ती दिन भर काक्रो बेचेर भरे बेलुका दाल चामल किनेर छोराछोरीलाई पाल्न विवश होलिन् ।
ट्राफिक प्रहरीलाई भने मैले आक्रोस पोखेँ । म आफै निरीह बन्नु पर्दा धिक्कार छ ।’ छोराछोरीको कमाइ खाएर घरमै सुतेर बस्ने बेला यी महिला रहरले काँक्रोको क्रेट बोकेर चर्को घाममा हिँडेकी पक्कै थिईनन् । पोखरामा सडकसम्मै आउने गरी सामान निकालेर ठूला व्यवसायीले फुटपाथ कब्जा गर्छन्, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बोल्न सक्दैन । नगर प्रहरी देखेको नदेख्यै गर्छ । साना डोके व्यवसायीलाई यसरी दुःख दिएर मनमा हरि समेत नभएको झैं प्रस्तुत हुन्छ । सानालाइै ऐन, ठूलालाई चैन ।
पोखरामा सडक व्यापार बन्द गरिएको छ । नियमानुसार पाईंदैन तर के तरिका ठीक भयो त ? सडकमा हिँडिरहेकी बृद्धालाई भित्र डाकेर नगर प्रहरी बोलाएर धुरुधुरु रुवाउनु मानवीय धर्म हो ? यो प्रश्न तिनै ट्राफिक र नगर प्रहरीलाई । पोखरा कुरुप बनाएको यिनै महिलाहरुले हो ? सार्वजनिक स्थान कब्जा गरेर बसेका भारतबाट आएका मगन्ते समुदाय, बाटोमा मागि हिँड्नेलाई नियन्त्रण गर्ने के छ महानगरको योजना ?
पोखरामा सडक व्यापार बन्द गरिएको छ । नियमानुसार पाईंदैन तर के तरिका ठीक भयो त ? सडकमा हिँडिरहेकी बृद्धालाई भित्र डाकेर नगर प्रहरी बोलाएर धुरुधुरु रुवाउनु मानवीय धर्म हो ? यो प्रश्न तिनै ट्राफिक र नगर प्रहरीलाई । पोखरा कुरुप बनाएको यिनै महिलाहरुले हो ? सार्वजनिक स्थान कब्जा गरेर बसेका भारतबाट आएका मगन्ते समुदाय, बाटोमा मागि हिँड्नेलाई नियन्त्रण गर्ने के छ महानगरको योजना ?source:oniletamang.com